Bloedarmoede Somalisch - Voorlichting Vertaald
Home huisarts Bloedarmoede Bloedarmoede Somalisch
Aniimiya (Dhiig yari)
Waa maxay dhiig yarida
Aniimiyada ama Dhiig-yaraantu waa ereyga guud oo loo isticmaalo in eey ogsijiinta ku jirta dhiigaaga ay aad u yartahay, taas oo kaa dhigi karta inaad dareento daal iyo daciifnimo. Waxaa jira sababo kala duwan oo keena dhiig-yarida:
Yaraanta Vitamin B12
Dhiig yarida ee birta
Dhiig Yaraanta birta waa dhigaagaga oo bir la’aan noqda
Sababaha keena dhiig yaraanta birta
Caado badan iyo uurku waxay sababi karaan birta oo dhiiga ku yaraato, tan waxaa lagu daweyn karaa daawooyin. Xaalado kasta oo kale oo keena lumis dhiig ayaa sidoo kale keeni kara birta oo dhiiga ku yaraata.
daal iyo tamar la'aan
neefta oo yaraata
maqaar saai’d u cad
Calaamadaha aan caanka ahayn:
maqalka dhawaaq gariir okale ah, cod shinni okale ama cod hiss ah gudaha madaxaaga (tinnitus)
cuntada oo nooc kale ah u dhedhenta
timaha oo daata - waxaad arkaysaa timo badan oo soo baxaya markaad shanlaynayso ama dhaqayso
inaad rabaato inaad cunto waxyaabaha aan cuntada ahayn, sida warqadda
in ay adagtahay laqida
nabaro furan oo xanuun badan oo ka muuqda geesaha afkaaga
Ballanta dhakhtarka (GP)
Dhakhtarku wuxuu ku weydiin doonaa qaab nololeedkaaga iyo taariikhdacaafimaad. Baaritaan fudud oo dhiig ah ayaa xaqiijin doonta haddii aad qabto dhiig-yari, taasoo laga yaabo in si isdaba joog ah loo sameeyo dhowrka bilood ee soo socda si loo hubiyo in heerka birta uu ku soo noqonayo sidii hore. Takhtarku waxa kale oo laga yaabaa inuu kuu gudbiyo dhakhtar takhusus leh si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo.
Daawaynta dhiig yarida birta
Waxa laguu qori doonaa kaniini bir ah si loogu badalo birta jidhkaaga ka maqan. Waxaad u baahan doontaa inaad qaadatid kaniiniga maalin walba, ilaa 6 bilood. Inaad cabto casiirka oranjada ka dib markaad qaadatid kiniiniga waxa laga yaabaa inay ku caawiso inuu jidhkaaga sifiican u nuugo birta.
Waxyeelooyinka kaniinga waxay noqon karaan:
inaad dareento jiro
Isku day inaad kaniiniyada qaadato adigoo cuntada cunaya ama wax yar ka dib cuntada si aad u yarayso fursada waxyeelooyinka. Waa muhiim inaad sii wadato qaadashada kaniiniyada, xitaa haddii aad leedahay waxyeelooyin.
Ka ilaali kiniinka birta carruurta!
Ka ilaali kiniinka kabka birta meel aanay carruurtu gaadhi karin. Qaadashada xad-dhaafka ah ee birta ee ilmaha yar waxay noqon kartaa dhimasho.
Waxyaabaha aad adigu samayn karto
Khudaarta caleenta madaw-cagaaran ah sida maraqa biyaha iyo kaluunka curdan
badarka iyo rootiga ay ku jirto bir dheeraad ah (la xoojiyay)
khudaar la qalajiyey sida khudaar, maraqa iyo sabiibdigirta (cambuulada, digirta and misirta)
Iska yaree cunida iyo cabida :
cuntooyinka leh heerarka sare ee phytic acid-ka, sida badarka cereals-ka, taas oo joojin karta in jidhkaagu inuu birta ka nuugo cuntooyinka kale iyo kaniiniyada
Dhiig yaraanta birta oo aan la daweyn
Hadii aan la daaweynin, dhiig-yarida birta waxay kugu keeni kartaa khatar ah inaad jiro ama caabuq qaado. Waxaa laga yaabaa inay kordhiso khatarta ah inay kugu dhacdo dhibaatooyin saameeya wadnaha ama sambabada - sida wadnaha oo si saxsan u shaqaynayn. Xilliga uurka, dhiig-yaraantu waxay keeni kartaa khatar weyn oo keeni karta dhibaatooyin ka hor iyo ka dib dhalashada.
Nooca kale ee dhiig-yarida waa fitamiin B12.
Sababaha yaraanta fitamiin B12 ama folate-ka
Waxaa jira sababo badan oo keeni kara inuu fitaamin B12 ama folate-ka jirka kuyaraadaan:
dhiig-yaraan halis ah – difaaca jirkaagaa ayaa weeraraya unugyada caafimaadka qaba ee calooshaada ku yaal, isaga oo ka hortagaya in jidhkaagu ka nuugo fitamiin B12 cuntada aad cunayso.
Cuntadaada oo an lahayn fitamiin B12- tani waxay dhici kartaa haddii aad leedahay cunto fiigan (vegan) ah oo aadan qaadan fitamiin dawooyinka kaba fiitamin B12 . Ama haddii aad cuntid cuntooyin lagu xoojiyay fitamiin B12 ama aad raacdo cunto aan caadi ahayn ama aad haysato cunto guud ahaan mudo heer liidatay.
daawo – Daawooyinka qaarkood waxay saamayn karaan inta fitamiin B12 uu jirkaaga nuugi karo
Calaamadaha fitamiin B12 yaraanta:
daal xad dhaaf ah
biinanka iyo cirbadaha (xanuun yar oo adag)
carrab xanuun iyo casaan
aragga oo khalkhalsan
niyad jab iyo wareer
dhibaatooyinka xusuusta, fahamka iyo xukunka
Daawaynta dhiig yarida fitamiin B12
Waxaad heli doontaa fiitamiin dawooyin kabiya fiitamin B12, oo inta badan marka hore lagu siiyo irbad. Intaa ka dib waxaad u baahan doontaa kiniinada B12 inta u dhaxaysa cuntooyinka ama cirbado joogto ah. Daawayntan ayaa laga yaabaa in loo baahdo illaa iyo inta noloshaada ka hadhay.
Wax badan cun:
cuntooyinka la xoojiyay
brokoli-ga, brussels-ka, sprouts-ka iyo digirta
Dhibaatooyinka dhiig yarida fitamiin B12
dhalmo la'aan ku meel gaar ah
dhibaatooyinka uurka iyo cudurada dhallanka
Kiniinnada birta Folic acid-ka Kiniinnada B12
Inta la qaadanayo 12-16 toddobaad 10-16 toddobaad 8-10 toddobaad
Goorma ayaa dhiiga laga qaadaa? 4 usbuuc kadib 4 usbuuc kadib 4 usbuuc kadib
Goorma ayaa la qaadanayaa kaniiniyada? - 2 saacadood ka hor cabitaanka kafeega, shaaha, caanaha
- 4 saacadood ka dib markaad cabto kafee, shaah, caano